Shunwei Capital သည် Stone Technology ၏ရှယ်ယာ များကို ၆% ထက်မပို စေ ဘဲ လျှော့ချခဲ့သည်။ - Pandaily
Shunwei Capital သည် Stone Technology ၏ရှယ်ယာ များကို ၆% ထက်မပို စေ ဘဲ လျှော့ချခဲ့သည်။
May 27, 2022, 14:10ညနေ 2022/05/29 22:00:57 Pandaily
စမတ် အိမ် သန့်ရှင်းရေး စက်ရုပ် ကုမ္ပဏီ Roborock ထုတ်ဖော်ရှယ်ယာ လျှော့ချရေး ကြေငြာချက်ကြာသပတေးနေ့ ည ။ အစုရှယ်ယာ ၈. ၈၇% ဖြင့် Venture Capital III (Hong Kong) Co., Ltd. ၏ အစုရှယ်ယာ စုစုပေါင်း ကို ၄, ၀ ၀၈, ၃ ၇၈ ထက်မပို စေ ဘဲ လျှော့ချ မည့် အစုရှယ်ယာ အရေအတွက်သည် ကုမ္ပဏီ ၏စုစုပေါင်း ရှယ်ယာ အရင်းအနှီး ၏ ၆. ၀၀% ထက်မပို စေ ရ။
Roborock ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Lei Jun (Xiaomi ၏ ပူးတွဲ တည်ထောင် သူနှင့် ဥက္က chairman ္ဌ) နှင့် Gao Ligen မှ တည်ထောင်ခဲ့သော Shunwei Capital နှင့် အစောပိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ များအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ “Xiaomi Ecological Chain” ကုမ္ပဏီ တစ်ခုအနေဖြင့် Stone Technology သည် အစောပိုင်း ကာလ များ၌ Xiaomi ၏ ပံ့ပိုး မှုဖြင့် ဆက်လက် တိုးတက်ခဲ့သည်။ Shanghai Star Market တွင် စာရင်းဝင် ပြီးနောက် သူသည် စျေးကွက် အောင်မြင်မှု ကို ခံစားခဲ့ရသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၎င်း ၏ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်း သည်ယွမ် ၁၄၀၀ (ဒေါ်လာ ၂၀၈) ထက်ကျော်လွန် ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှစ၍ Xiaomi သည် ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ များ ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် လျှော့ချ ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုကိုလည်း လျှော့ချခဲ့သည်။
Stone Technology ၏ အလားအလာ တစ်ခုအရ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကုမ္ပဏီသည် ရှယ်ယာ လွှဲပြောင်း မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ ပိုင်ရှင် Hi-P International သည် အစုရှယ်ယာ အချို့ကို Gaorong Capital ၊ Qiming Venture Partners နှင့် Shun Capital သို့လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် Shunwei Capital သည်ယွမ် ၃. ၅၂ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ၂၂, ၇ ၆၇) ၏ ၀. ၃% ကို ၀ ယ်ယူ ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပြီးတွင် Stone Technology ၏တန်ဖိုး မှာယွမ် ၁. ၁ ၈၄ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:AI Corporation Huiye Technology Guarantee သည် Pre-A Financing အတွက် သီးသန့် အရင်းအနှီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်သည်
၂၀၁၆ ခုနှစ် April ပြီ လတွင် Stone Technology သည် ရန်ပုံငွေ အသစ်ကို ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ယွမ် ၁၀. ၉ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။ Stone Technology သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပြီးတွင် ယွမ် ၁. ၄ ၈၂ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိသည်။ 2019 မတ်လတွင် Shunwei Capital သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကိုထပ်မံ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကို စာရင်း မသ ွင်း မီ Shun Wei Capital သည် ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာ ၁၂. ၈၅% ကိုပိုင်ဆိုင် ခဲ့သည်။
Stone Technology ကို စာရင်းပြုစု ပြီးနောက် Shunwei Capital သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လ ၁၆ ရက်မှ April ပြီ ၁၄ ရက်အထိ အစုရှယ်ယာ ၅၀၀, ၀၀၀ ကိုလျှော့ချ ရာတွင် ဦး ဆော င်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ရှယ်ယာ စုစုပေါင်း၏ ၀. ၇၅% ရှိသည်။ Roborock တွင်၎င်း၏ ရှယ်ယာ သည် ၈. ၈၇% သို့ကျဆင်းသွားသည်။
အကယ်၍ ဤ အချိန်တွင် အစုရှယ်ယာ လျှော့ချ မှု အရေအတွက်သည် စီစဉ် ထားသည့် အများဆုံး ပမာဏ သို့ရောက် ရှိပါက အရင်းအနှီး ပိုင်ဆိုင်မှု အချိုးအစား သိသိသာသာ ကျဆင်း သွားလိမ့်မည်။ ထိပ္တန္း ရွယ္ယာ ရွင္ ငါး ဦးမွ ပင္ ႏုတ္ထြက္ ႏိုင္သည္။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Stone Technology ၏ရှယ်ယာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကျဆင်းခဲ့သည်။ ၎င်း ၏အရေးပါသော အစုရှယ်ယာ ရှ င်များ၏ အစုရှယ်ယာ လျှော့ချရေး အစီအစဉ်သည် ကုမ္ပဏီ၏ စတော့ စျေးနှုန်း အပေါ် နောက်ထပ် ဖိအား ပေးနိုင်သည်။
Industry Mar 02 မတ် 2, 2021